3 Ndị a bụ ndị si n’usoro ọmụmụ Erọn na Mozis n’ụbọchị Jehova gwara Mozis okwu n’Ugwu Saịnaị.+ 2 Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Erọn: Nedab bụ́ ọkpara na Abaịhu+ na Elieza+ na Ịtama.+ 3 Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Erọn, bụ́ ndị nchụàjà e tere mmanụ, ndị e nyere ike ịrụ ọrụ dị ka ndị nchụàjà.+ 4 Otú ọ dị, Nedab na Abaịhu nwụrụ n’ihu Jehova mgbe ha surere ihe nsure ọkụ nke iwu na-akwadoghị+ n’ihu Jehova n’ala ịkpa Saịnaị; ha amụtaghịkwa nwa ọ bụla. Ma Elieza+ na Ịtama+ nọ na-arụ ọrụ dị ka ndị nchụàjà, ha na Erọn nna ha. 5 Jehova wee gwa Mozis, sị: 6 “Kpọta ebo Livaị+ nso, meekwa ka ha guzoro n’ihu Erọn onye nchụàjà, ha ga na-ejekwara ya ozi.+ 7 Ha ga na-arụ ọrụ ha kwesịrị ịrụrụ ya na ọrụ ha kwesịrị ịrụrụ ọgbakọ ahụ dum n’ihu ụlọikwuu nzute site n’ije ozi ụlọikwuu ahụ. 8 Ha ga na-elekọta arịa+ niile nke ụlọikwuu nzute, ọbụna ọrụ ụmụ Izrel kwesịrị ịrụ site n’ije ozi ụlọikwuu ahụ.+ 9 Ị ga-ewere ndị Livaị nye Erọn na ụmụ ya. Ha bụ ndị e nyere enye, ndị e si n’ụmụ Izrel+ nye ya. 10 Ị ga-ahọpụta Erọn na ụmụ ya, ha ga na-arụ ọrụ ha dị ka ndị nchụàjà;+ a ga-egbu onye nkịtị ọ bụla nke bịara nso.”+ 11 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị: 12 “Mụ onwe m, lee! m na-akpọrọ ndị Livaị n’etiti ụmụ Izrel n’ọnọdụ nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ+ nke meghere akpa nwa n’etiti ụmụ Izrel; ndị Livaị ga-aghọkwa nke m. 13 N’ihi na nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ bụ nke m.+ N’ụbọchị m gburu nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ala Ijipt,+ m dooro onwe m nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’Izrel nsọ, malite na mmadụ ruo n’anụmanụ.+ Ha ga-abụ nke m. Abụ m Jehova.” 14 Jehova wee gwa Mozis okwu ọzọ n’ala ịkpa Saịnaị,+ sị: 15 “Deba aha ụmụ ndị ikom Livaị n’akwụkwọ dị ka ụlọ ndị nna ha si dị, n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ị ga-edeba aha nwoke ọ bụla n’akwụkwọ+ malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe.” 16 Mozis wee malite ideba aha ha n’akwụkwọ dị ka Jehova gwara ya, dị nnọọ ka o nyere ya n’iwu. 17 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Livaị,+ n’aha n’aha: Geshọn na Kohat na Meraraị.+ 18 Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Geshọn, n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Libnaị na Shimiaị.+ 19 Ụmụ ndị ikom Kohat,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ, bụ Amram na Izha,+ Hibrọn na Ọziel. 20 Ụmụ ndị ikom Meraraị,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ, bụ Malaị+ na Mushaị.+ Ọ bụ ezinụlọ ndị a bụ ezinụlọ ndị Livaị, dị ka ụlọ ndị nna ha si dị. 21 Ndị bụ́ ezinụlọ Geshọn bụ ezinụlọ ụmụ Libnaị+ na ezinụlọ ụmụ Shimiaị.+ Ọ bụ ezinụlọ ndị a bụ ezinụlọ ụmụ Geshọn. 22 E debara aha ha n’akwụkwọ dị ka ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke niile si dị, malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe.+ Ndị e debara aha ha n’akwụkwọ n’ime ha dị puku asaa na narị ise.+ 23 Ezinụlọ ụmụ Geshọn nọ n’azụ ụlọikwuu ahụ.+ Ha mara ụlọikwuu n’ebe ọdịda anyanwụ. 24 Onyeisi ọnụmara ụmụ Geshọn bụ Elayasaf nwa Leyel. 25 Ọrụ ụmụ Geshọn+ n’ụlọikwuu nzute bụ ịhụ maka ụlọikwuu ahụ na ákwà ụlọikwuu ya,+ ihe mkpuchi+ ya na ákwà ngebichi+ ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, 26 na ákwà ngechi+ ogige ya na ákwà ngebichi+ ọnụ ụzọ ogige ya nke gbara ụlọikwuu ahụ na ebe ịchụàjà ya gburugburu, na ụdọ ụlọikwuu ya+—ozi niile metụtara ya. 27 Ndị bụ́ ezinụlọ Kohat bụ ezinụlọ ụmụ Amram na ezinụlọ ụmụ Izha na ezinụlọ ụmụ Hibrọn na ezinụlọ ụmụ Ọziel. Ọ bụ ezinụlọ ndị a bụ ezinụlọ ụmụ Kohat.+ 28 N’ime ndị niile bụ́ ụmụ nwoke, malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe, e nwere puku mmadụ asatọ na narị isii, bụ́ ndị na-arụ ọrụ e kwesịrị ịrụ n’ebe nsọ ahụ.+ 29 Ezinụlọ ụmụ Kohat mara ụlọikwuu n’akụkụ ụlọikwuu ahụ, n’ebe ndịda.+ 30 Onyeisi ọnụmara ezinụlọ dị iche iche nke ụmụ Kohat bụ Elizefan nwa Ọziel.+ 31 Ọrụ+ ha bụ ịhụ maka Igbe+ ahụ na tebụl+ ahụ na ihe ndọba oriọna+ ahụ na ebe ịchụàjà+ ndị ahụ na arịa+ ndị dị n’ebe nsọ ahụ, bụ́ ndị ha ga-eji na-eje ozi, tinyere ákwà ngebichi ahụ,+ nakwa ozi niile metụtara ya. 32 Ọ bụ Elieza+ nwa Erọn onye nchụàjà bụ onyeisi nke ndị isi niile nke ụmụ Livaị, bụ́ onye na-elekọta ndị na-arụ ọrụ e kwesịrị ịrụ n’ebe nsọ ahụ. 33 Ndị bụ́ ezinụlọ Meraraị bụ ezinụlọ ụmụ Malaị+ na ezinụlọ ụmụ Mushaị.+ Ọ bụ ezinụlọ ndị a bụ ezinụlọ Meraraị.+ 34 E debara aha ha n’akwụkwọ dị ka ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke niile si dị, malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe. Ha dị puku isii na narị abụọ.+ 35 Onyeisi ọnụmara ezinụlọ Meraraị bụ Zuriel nwa Abihel. Ha mara ụlọikwuu n’akụkụ ụlọikwuu ahụ, n’ebe ugwu.+ 36 Ọrụ e nyere ụmụ Meraraị bụ ilekọta awara osisi+ nke ụlọikwuu ahụ na osisi ntụhie+ ya na ogidi+ ya na ntọala ya ndị nwere oghere na arịa+ ya niile nakwa ozi niile metụtara ya,+ 37 na ogidi+ niile nke ogige ya gbaa gburugburu na ntọala ha ndị nwere oghere+ na mkpọ́ ụlọikwuu ha na ụdọ ụlọikwuu ha. 38 Ndị mara ụlọikwuu n’ihu ụlọikwuu ahụ, n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ihu ụlọikwuu nzute, n’ebe ọwụwa anyanwụ, bụ Mozis na Erọn na ụmụ ya, bụ́ ndị na-arụ ọrụ e kwesịrị ịrụ n’ebe nsọ ahụ,+ bụ́ ọrụ e kwesịrị ịrụrụ ụmụ Izrel. A ga-egbu+ onye nkịtị ọ bụla nke bịara nso. 39 Ndị Livaị niile e debara aha ha n’akwụkwọ, bụ́ ndị Mozis na Erọn debara aha ha n’akwụkwọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ, dị ka Jehova nyere n’iwu, ụmụ nwoke niile malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe, dị puku iri abụọ na puku abụọ. 40 Jehova wee sị Mozis: “Deba aha ụmụ nwoke niile e bu ụzọ mụọ n’ụmụ Izrel n’akwụkwọ, malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe,+ dee ole aha ha dị. 41 Kpọrọ ndị Livaị ka ha bụrụ nke m n’ọnọdụ ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel+—abụ m Jehova, chịrịkwa anụ ụlọ ndị Livaị n’ọnọdụ anụ niile e bu ụzọ mụọ n’ime anụ ụlọ niile nke ụmụ Izrel.”+ 42 Mozis wee deba aha ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel n’akwụkwọ, dị nnọọ ka Jehova nyere ya n’iwu. 43 Ụmụ nwoke niile e bu ụzọ mụọ, dị ka ole aha ha dị, malite ná ndị ruru otu ọnwa gbagowe, n’ime ndị e debara aha ha n’akwụkwọ, wee dịrị puku iri abụọ na abụọ, narị abụọ na iri asaa na atọ. 44 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị: 45 “Kpọrọ ndị Livaị n’ọnọdụ ụmụ niile e bu ụzọ mụọ n’etiti ụmụ Izrel, chịrịkwa anụ ụlọ ndị Livaị n’ọnọdụ anụ ụlọ ha; ndị Livaị ga-aghọkwa nke m.+ Abụ m Jehova. 46 Dị ka ihe a ga-akwụ iji gbapụta+ narị mmadụ abụọ na iri asaa na atọ ndị si n’etiti ndị e bu ụzọ mụọ n’ụmụ Izrel, bụ́ mmadụ ole ha ji karịa ndị Livaị,+ 47 nata shekel ise maka otu onye.+ Ọ bụ shekel ebe nsọ ka ị ga-eji tụọ ya. Otu shekel bụ gira iri abụọ.+ 48 Nye Erọn na ụmụ ya ego ahụ ka ọ bụrụ ihe a kwụrụ iji gbapụta mmadụ ole ha ji karịa ha.” 49 Ya mere, Mozis natara mmadụ ole ahụ ha ji karịa ndị Livaị ego mgbapụta ahụ ka ọ bụrụ ihe a kwụrụ iji gbapụta ndị Livaị. 50 Ọ bụ ndị e bu ụzọ mụọ n’ụmụ Izrel ka ọ natara ego ahụ, ya bụ, otu puku shekel, narị atọ na iri isii na ise, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya. 51 Mozis wee nye Erọn na ụmụ ya ego mgbapụta ahụ dị ka Jehova nyere n’iwu, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu.